FAMPIANARANA AMBARATONGA FOTOTRA- Notokanana ny EPP Ankadikely Ilafy - Ministère de l'Education Nationale
FAMPIANARANA AMBARATONGA FOTOTRA- Notokanana ny EPP Ankadikely Ilafy
Lanonana telo sosona no natrehan’ny Tale Jeneralin’ny fanabeazana fototra sy mamaky teny sy manoratra, teny amin’ny faritra avaradrano ny alakamisy 31 marsa 2016.
Voalohany ny fitokanana ny EPP Ankadikely, ao anatin’ny kaominina Ankadikely Ilafy. Efitrano roa vao nahorina no notokana, isan’ny ezaka manokana nataon’ny Minisiteran’ny fanabeazam-pirenena izy ity . « Tsy mitsahatra ny ezaka amin’ny fampiakarana lenta ny fampianarana, amin’ny alalan’ny fanomezana fiiofanana ireo mpampianatra , izao iarahantsika mahita izao ihany koa ny fananganana foto-drafitrasa » hoy Andriamampandry Todisoa, tale jeneralin’ny fanabeazana fototra.
Faharoa, notontosaina teo amin’ny CISCO Avaradrano ny fanekena ampahibemaso ireo ho tafiditra ho mpiasam-panjakana amin’ireo mpampianatra Fram na« validation plénière de la liste des recrutables 3eme vague » .
Ambohimpihaonan’ireo mpiantsehatra eo amin’ny tontolon’ny fampianarana teny Avaradrano, mbola miisa 700 mahery ireo mpampianatra Fram tsy tafidita ho mpiasam-panjakana ato amin’ny Cisco Avaradrano. « Tsy maintsy ho tafiditra daholo ianareo rehetra fa saingy mandeha amin’ny fandaminana izany, efa misy ny mason-tsivana napetraky ny minisitera, ka tokony hajaina izany » hoy ny tale jeneraly.
Fahatelo dia ny fametrahana vatofehizoro, izay hanamarihana ny fanombohana ny asa fananganana ny CSB II Ankadikely, izay niarahany tamin’ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka, izay notanterahina niaraka tamin’ny fitokanana ny toeram-panasan-damba ho an’ny mponina.